Mametraka an-tsarintany ny tondra-drano any Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, Ελληνικά, Italiano, English
Tondra-drano Bangkok. Avy amin'ny mpisera twitter @khunknow
Avoitran'ny Sarintanin'ny Tondradrano ao Thailandy ny faritra voa mafy indrindra, ny faritra mampididoza ary ny faritra tratrany
Eto ambany indray ny Rafitra anarahan'ny governemantan'i Thailand maso ny tondra-drano
Ny rafitra mpanaramaso ny haavon'ny rano eny amin'ny lakandrano sy ny renirano
Ny sampan-draharahan'ny lalambe manamarika ny lalana tondraka. Ny fiara mena midika hoe lalana tondraka sady tsy azo andehanana. Ny fiara maitso milaza lalana tondraka saingy azo andehanana amim-pitandremana. Ny tsipika manga manamarika ny lalankafa azo andehanana
Nisy fombam-pivavahana Brahman hampihenana ny haavon'ny rano notontosain'ny fitondrana hangatahana amin'i Kang Ka, Andriamanibavin'ny renirano, hidinan'ny rano haingana ao Bangkok. Napetraka hamonjena ny tra-boinan'ny tondradrano ny laharana Hotline an-tserasera. Manaiky fanomezana hanampiana an'i Thailandy ny Vokovoko Mena.
Manome ny toe-draharaha any Bangkok i Richard Barrow
Na dia teo aza ny rindrina fisorohana ny tondradrano, mihoatra ny 1200 ny fianakaviana any amin'ny fokontany 27 ivelan'ny ridrin-drano manara-morona ny reniranon'i Chao Phraya, ny lakandranon'i Bangkok Noi ary ny lakandrano Maha Sawat no mety ho tra-doza.
Mieritreritra aho fa hisy ny tondra-drano voafehy ao anatin'ny fotoana fohy any amin'ny faritra sasany. Efa maro ny vitan-dry zareo hiarovana an'i Bangkok amin'ny tondra-drano nandritr ny taona maromaro lasa izay. Efa nanampo tranga ratsy toy ny tamin'ny herintaona izahay fa tsy diaratsy loatra taty afara. Tantara hafa moa mazava loatra ny faritra hafa ao amin'ny firenena.
Talantalana foana nandritra ny fitondrahana. mpisera twitter @icetimicetim
Niasa tokoa ny tenifototra #thaiflood nandritra ny andro maromaro
@tumbler_p Nahare fa tsy azo ampiasaina ny lazaina ho tonelina lehibe natao hanarian-drano ao Bkk. Aza milaza amiko hoe tonelina foroporonina fotsiny ireo..
@freakingcat oram-batravatra nandritr ny volana maromaro – rendrika i Bangkok
@bamboohuts Fiaraha-miory ho an'ny tratran'ny #thaiflood [tondra-drano]. manantena izahay fa hifarana haingana ao anatin'ny fahapotehana kely indrindra ity krizy ity.
@TheLilyfish mahatalanjona ny mponina avy ao Ayutthaya izay manana toetsaina ambony mandrakariva sy tia namaa na dia efa 3 metatra ambanin'ny rano aza…
Lasakam-pasika ambonin'ny haavon'ny rano. avy amin'ny mpisera twitter @khunknow
@alexandrachua RT @Vvanessaaaa: Thailand dia manana faritany 77 saingy 55 no tondraka ary miandry ny anjarany ny ambiny.
@ChaiyaBenz Mitady ho ratsy koa ny tondradrano any Khon Kaen. mbola miakatra ny rany avy amin'ny reniranon'i Nampong ! Vonjeo!! #Thaiflood
@thai_intel tatitra milza fa maro ny tsenam-barotra thai no mamela malalaka ny olona hametraka ny fiarany eo amin'ny parking mba tsy haninona
@tulsathit Miantraika any amin'ny ozinina mihoatra ny 1200 manerana ny firenena ny tondra-drano, ary mahazo mpiasa 41000. Miantso ny ozinina tsy handroaka mpiasa ny Govt
Soratra miverina: Ny Lahatsoratra Global Voices Be Mpamaky Indrindra Tamin’ny Taona 2011 · Global Voices teny Malagasy
[…] Mametraka an-tsarintany ny tondra-drano any Thailandy [mg] (sy ity [fr]) […]
09 Janoary 2012, 11:46